porn-related ဒဏ္thာရီများနှင့်ဆင်ခြေ (reddit / pornfree မှ) - သင့် ဦး နှောက် On Porn
(reddit / pornfree ထံမှ) porn-related ဒဏ္ဍာရီနှင့်ဆင်ခြေများစာရင်းတစ်ခု
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၊ စိတ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကောင်းသောအရာမှထွက်ရန်ပိုမိုခက်ခဲစေသည့်နည်းလမ်းများစွာကိုမင်းတို့အများကသတိပြုမိသည်သေချာသည်။ ငါတကယ်အရေးကြီးသည်မှာ porn ကိုစွန့်လွှတ်လိုသူများသည်ဤအရာများကိုသတိပြုမိရန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သတိပြုမိခြင်းနှင့်သူတို့၏မှားယွင်းသောအယူအဆများကလူတို့အား၎င်းအားဖြတ်သန်း။ ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်ကူညီနိုင်သည်။ ငါဒီလောကစောင့်ရှောက်မည် ဒီစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားဖို့လူတချို့ကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအသုံးချခဲ့ကြတာသေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လူအများအပြားကိုကူညီဖို့ကျွန်မရဲ့ post ကိုလောကလောကကနေထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာပါ။
“ ငါထာဝရထာဝရ” - ခင်ဗျားထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်၊ ကောင်းပြီ၊ ငါဒါကိုအမြဲတမ်းစွန့်လွှတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါနောက်ဆုံးမှာပြန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံကောင်းလက်ခံလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ငါအဖြစ်ကောင်းစွာရုံ fap ပေလိမ့်မည်။ " ဒါကမမှန်ပါဘူး သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာလုံးဝဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်ဟုမဆိုလိုပါ။ သို့သော်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်ချိန်တွင်အနည်းဆုံးအားဖြင့်အချို့သောမကောင်းဆိုးဝါးနှိမ်နင်းရေးပစ္စည်းများကိုအွန်လိုင်းသို့မ ၀ င်မိရန်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းကိုသင်မည်သို့တုံ့ပြန်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ထို့အပြင်သင်သည်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲနေသမျှကာလပတ်လုံးတတ်နိုင်သလောက်လုပ်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်၊ အကြောင်းမှာယင်းသည်သင်၏စွဲလမ်းမှုအခြေခံသည့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းများကိုအားနည်းစေသောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
"incel များအတွက်ကျန်းမာလွှတ်ပေးရန်" - ငါ incels နေသောယောက်ျားများသည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်လွှတ်ပေးရန်လိုသည်၊ ၎င်း porn သည်သူတို့၏လိင်နှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟူသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်များစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်သဘောမတူပါ။ ပထမ ဦး စွာလူအများစုကဤတံဆိပ်ကိုချိုင်းထောက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ ဤ“ အင်းဆက်” များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းနေလျှင်၎င်းတို့သည်သူတို့၏အကောင်းဆုံးအခွံများဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့က porn ကိုစွန့်ခွာမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာမိန်းကလေးရည်းစားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အချို့သောယောက်ျားများသည်တစ် ဦး တည်းသီးသန့်နေလိုလျှင်ပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ချိန်လုံးကြည့်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းထက်ထိုအရာကိုကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုကိုလျှော့ချရုံသာမကဘာမှမလုပ်ပါ။ ၎င်းမှပေါ်ထွက်လာမည့်အရှက်ကွဲခြင်း၊ မနာလိုခြင်းနှင့်ရပိုင်ခွင့်များကကိစ္စရပ်များကိုလုံး ၀ ကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
“ မပြင်မချင်း (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကိုမဖြည့်စွက်ပါက) ကျွန်ုပ်သည်မည်သို့မည်ပုံထားရှိမည်နည်း။ ဒါကြောင့်ငါသည်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်လိမ့်မည်။ " - သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်ရန်ခက်ခဲစေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာသင်နဲ့သင့်မြတ်တဲ့၊ အစစ်အမှန်ဆက်နွယ်မှုမှနောက်ထပ်ဝေးကွာသွားလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ခြင်းကသင့်ကိုပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိစေလိမ့်မယ်။
“ ပုံမှန်ပါပဲ၊ လူတိုင်းလုပ်နေကြတာပဲ” - အရည်အသွေးမြင့်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံရုပ်ထွက်ဗီဒီယိုများကိုအကန့်အသတ်မရှိထောက်ပံ့ပေးသောပြွန်ဆိုဒ်များစွာမရရှိနိုင်ပါ အစဉ် အဖြစ်မှတ်ယူရမည်။ အဘယ်ရှုထောင့်ကနေပုံမှန်? ပြည်သူ့ကြောင်းမေးမြန်းဖို့ရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။ လူအများအပြားကအဲဒါကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တစ်ခုခုလား။ ယဉ်ကျေးမှုအရဖြစ်နိုင်သည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒလား။ ဂယ်ရီဝီလ်ဆင်ထောက်ပြသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကိုင်တွယ်ရန်မဖွံ့ဖြိုးသေးပါ။ ငါတို့အများစုသည်ဘိုးဘေးဘီဘင်များမြင်တွေ့လိုသောအိပ်မက်မက်ခဲ့ခြင်းထက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုစစ်မှန်တဲ့လိင်မဟုတ်ဘဲ pixel တွေနဲ့ဖွင့်ဖို့ကြိုးတပ်ထားတယ်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကမူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သော်ယနေ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်းသည်လုံးဝမကျန်းမာပါ။
“ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေလုပ်တာကပုံမှန်လို့ပြောတာပဲ” - မင်းရဲ့အမှတ်လား။ ဒီဟာကောင်းတယ်? အကယ်၍ သူတို့၏ဘဝများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစောင့်ကြည့်နေသည့်ကြားမှပင်လျှင်၊ လူအများစုအတွက်မူ၎င်းသည်အဖျက်စွမ်းအားဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့သက်ကြီးရွယ်အိုများစွာကဒီနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွဲလမ်းတာဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာကိုတကယ်မသိကြဘူး။ ခေတ်သစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းသည် ၁၉၉၀ ဗားရှင်းနှင့်များစွာကွာခြားသည်။
"လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်မိန်းကလေးများဝတ်စားဆင်ယင်ပုံအကြားလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ယခုအချိန်တွင်လိင်ဆက်ဆံမှုအလွန်များနေသည်။ porn / relapses မပါဘဲလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး; သွေးဆောင်မှုအရမ်းများလွန်းတယ်” - ပြီးတော့မင်းကဒါကိုမင်းကိုညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းနေတဲ့ ဦး နှောက်နဲ့စဉ်းစားနေလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက်ပေါင်း ၉၀-၁၂၀ အထိအရက်မသောက်ရန်စမ်းကြည့်ပါ၊ သင့်အားအားပေးမှုနှင့်သွေးဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောသင်၏ဘ ၀ မှ Snapchat (Instagram, Instagram, Facebook စသည်ဖြင့်) ကိုဖယ်ရှားပါ။ သင်၏အတွေးများကိုတတ်နိုင်သမျှထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ၊ သို့မဟုတ်သူတို့ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါရှုံးနိမ့်သူအတွေးများကိုစိန်ခေါ်ပါ။
“ ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ကမကောင်းဘူး။ ကောင်းပါတယ် ဂယ်ရီ Wilson သည်ဘက်လိုက်မှုရှိပြီးသုတေသနသည်ယခုအချိန်တွင်ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ။ ဘာသာရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိသောလူသာလျှင်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်လိမ့်မည်။ စသည် - ဘာကြောင့်ဒါမဟုတ်တာလဲ။ နင်ဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထောက်ခံချက်များကိုသင်ငြင်းဆန်မည်လား။ ဒါမှမဟုတ်အရည်အသွေး၊ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့သုတေသနဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပိုပြီးလုပ်လာနေတယ်၊ ​​အများစုကကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်အချို့မှာလုပ်နေတာလား။ ဒါကိုပြasနာတစ်ခုအနေနဲ့မပယ်ခင်အနည်းဆုံးစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။
“ ညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုထဲကလူတွေကခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဘာလုပ်ဖို့လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိပြီးအဲဒါအတွက်ပေးဆပ်နေကြတယ်။ ငါကြည့်ရတာမကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ - ဒါကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့မှာလုပ်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ကိုအခန်းကဏ္offeredကိုကမ်းလှမ်းတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကလူတွေရဲ့အားသာချက်ကိုရယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူတို့အခုနောက်ထပ်ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ အကယ်၍ လူများသည်သူတို့၏အတိတ်အကြောင်းကိုသိရှိပါက၎င်းသည်အခြားအလုပ်များတွင်ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
“ ငါဆိုးတဲ့နေ့တစ်နေ့ရှိတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်တည်းကမဆိုးပါဘူး ဒါကိုငါလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ဒါကြောင့်ငါပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါဒါကိုထပ်ပြီးလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်” - ဒါတကယ်မင်းလိုချင်တာလား။ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ရန်နှင့်စွန့်လွှတ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းအား? သငျသညျခက်ခဲမူးရူးတက်အဆုံးသတ်နှင့်သင်လုပ်တိုးတက်မှုတွေအများကြီးကိုဖကျြဆီးနိုငျသညျ။ သင်စလုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုပါကဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာမကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ရှိခဲ့လျှင်၊ ဒီစက္ကန့်အနည်းငယ်သောပျော်မွေ့မှုတွေပျောက်ကွယ်သွားပါကပြန်လည်သက်သာသွားခြင်းကပိုမိုဆိုးရွားသွားစေနိုင်ပါတယ်။
“ ပုံနည်းနည်းလောက်ပဲထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်တယ်ဗွီဒီယိုတစ်ခု (သို့) နှစ်လုံးကထိခိုက်နစ်နာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အထွတ်အထိပ်ကဘာလဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏကြာပြီ” - ဘာကြောင့်ဒီဂိမ်းတွေကစားရတာလဲ။ သင် porn ကိုစွန့်လွှတ်ဖို့တကယ်လေးနက်ပါသလား သင်ကိုယ်တိုင်ရိုးသားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်သိသင့်သည်; ဒါကခင်ဗျားအနေနဲ့ relapse ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ လူများသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်မတော်တဆဖြစ်ပုံရရန်ကြိုးစားသည့်ဤကာကွယ်ရေးယန္တရားလည်းရှိသည် - သူတို့က Instagram သို့မဟုတ်တစ်ခုခုကိုလှန်လှောရှာဖွေခြင်းနှင့်“ သူတို့အဲဒီမှာကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုဆိုးတယ်” သော pics သို့မဟုတ် vids အချို့သို့ရောက်သွားနိုင်သည်။ ပြင်ပအရင်းအမြစ်မှသူတို့ relapse ။
"ငါ့အသက်ကိုအတွက် X ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ရပ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေးလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုနီးကပ်လာပြီး porn အခမဲ့ဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ထွက်ခွာမည်။ OR Y ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကမကြာခင်ကုန်တော့မယ်။ Y ရဲ့ဖိစီးမှုတွေပျောက်သွားတဲ့အခါငါထွက်သွားနိုင်ပြီ။ ” - ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေခြင်းဖြင့်သင့်အားမည်မျှအထိရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းကြည့်ပါ။ သင်တကယ်နုတ်ထွက်လိုလျှင်အဘယ်ကြောင့်စောင့်ရမည်နည်း။ သင်ကပြit'sနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ရနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၌ X၊ Y နှင့် Z ကိုကျွန်ုပ်အတွက်ရှာယူသည်။ ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ပြproblemနာဖြစ်နေရတာလဲ” - သင်လိင်အကျင့်စွဲနေစဉ်အဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပြaနာမဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကင်းဝေးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်မည့်အရာများကိုမည်သူသိသနည်း။ သင်အများကြီးပိုလုပ်ရလိမ့်မယ် - သို့မဟုတ်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိအတွက်အလုပ်လုပ်သလောက်ရုန်းကန်မရလိမ့်မယ်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, ကရိုက်ချက်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။
“ ကျွန်မဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်လက်မထပ်ခင်လိင်ဆက်ဆံတာ၊ ငါကဲ့သို့ကောင်းစွာပြုပါလိမ့်မယ်။ " - သင်သည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မကိုးကွယ်သည်မှာသင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိမဆုံးဖြတ်သင့်ပါ။ သင်ဘ ၀ ၌အကောင်းဆုံးသောသူဖြစ်လိုခြင်းမှာခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သင့်သည်။
ဒီဟာကမပြည့်စုံတဲ့စာရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲဒီအရာများစွာနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးဒီဆင်ခြေများနှင့်ဒဏ္sာရီများကိုပိုမိုသတိပြုမိလာရန်ကြိုးစားနေသည်။ ဒီဟာကမင်းရဲ့ခရီးအချို့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပို့ရန် LINK - porn-related ဒဏ္ဍာရီနှင့်ဆင်ခြေများစာရင်းတစ်ခု